Ch 28 Matiu – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Matiu / Ch 28 Matiu
28:1 Ugbu a na n'ụtụtụ nke Sabbath, mgbe ọ malitere na-eto eto ìhè na mbụ Sabbath, Meri Magdalin na Meri nke ọzọ gara ịhụ n'ílì.
28:2 Ma, le, oké ala ọma jijiji mere. N'ihi na ihe mmụọ ozi Jehova si n'eluigwe rịdata, na dị ka ọ bịakwutere, ọ akpọrepu azụ nkume ma nọdụ ala na ya.
28:3 Ugbu a ya yiri àmụmà, na ya vestment dị ka snow.
28:4 Mgbe ahụ, si egwu ya, ndị nche ụjọ, na ha dị ka ndị nwụrụ anwụ.
28:5 Mgbe ahụ Angel gwara ha, sị ndị inyom: "Atụla ụjọ. N'ihi na m maara na ị na-achọ Jesus, onye nọ na kpogidere.
28:6 Ọ bụghị ebe a. N'ihi na ọ na bilitere, dị ka o kwuru. Bịa na-ahụ ebe Jehova e debere.
28:7 Ọzọkwa, gaa ngwa ngwa, na-agwa ya na-eso ụzọ nke o bilitere. Ma, le, ọ ga-ebu gị Galilee. E nwere ị ga-ahụ ya. ọ, Na m gwara unu tupu oge eruo. "
28:8 Ha wee si n'ili ngwa ngwa, egwu na oké ọṅụ, na-agba ọsọ iji gwa ya ka ọ na-eso ụzọ.
28:9 Ma, le, Jizọs zutere ha, si, "Ekele." Ma ha na-eru nso jide ụkwụ ya, na ha adored ya.
28:10 Jizọs wee sị ha: "Atụla ụjọ. Gaa, igwa ya ụmụnna m, nke mere na ha nwere ike gaa Galili. N'ebe ahụ ka ha ga-ahụ m. "
28:11 Ma mgbe ha la, le, ụfọdụ n'ime ndị nche wee banye obodo, na ha kọọrọ ndị ndú nke ndị nchụàjà ihe niile mere.
28:12 Ma na-ekpokọta ha na ndị okenye, enwe e ndụmọdụ, ha nyere ihe dị ukwuu ego ndị agha,
28:13 si: "Kwuo na eso ụzọ ya lọghachiri n'abalị zuru ya, mgbe anyị na-ehi ụra.
28:14 Ma ọ bụrụ na onye ọchịchị na-anụ banyere nke a, anyị ga-emekwa ka ndị ya, na anyị ga-echebe gị. "
28:15 Mgbe ahụ, ọ nabatara ego, ha mere ka ha na-gwara. Na a okwu a gbasara n'etiti ndị Juu, ọbụna ruo taa.
28:16 Ugbu a iri na otu na-eso ụzọ wee Galilee, ugwu ebe Jisus nyere ha.
28:17 Na, hụrụ ya, ha na-efe ya, ma ụfọdụ ndị nwere obi abụọ.
28:18 Na Jizọs, -eru nso, gwa ha okwu, si: "Ikike niile e nyere m dị n'eluigwe na n'elu ụwa.
28:19 Ya mere, -aga ma na-akụziri mba nile, eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ,
28:20 ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n'iwu mgbe. Ma, le, M nọnyeere gị mgbe niile, ọbuná na consummation nke afọ. "